कोरोना भाइरस कति खतरनाक, कसरी जाेगिने ? जानाैँ यी तथ्य | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार कोरोना भाइरस कति खतरनाक, कसरी जाेगिने ? जानाैँ यी तथ्य
कोरोना भाइरस कति खतरनाक, कसरी जाेगिने ? जानाैँ यी तथ्य
२०७६, २० फाल्गुन मंगलवार १७:५३
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण चीनको वुहान हुँदै अहिले विश्वभर नै फैलिसकेको छ । कोरोना भाइरस कुनै जनावरबाट मानिसमा फैलिएको आशंका गरिएको छ, यद्यपि यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । र, पर्याप्त सावधानी नअपनाएकै कारण यसको असर विश्वभर नै फैलिएको हो । यो भाइरसको पहिचान सन् २०१९ को अन्तिमतिर भएको थियो । कोरोना के हो र कसरी सावधानी अपनाउने भन्नेबारे हामीले एक यो रिपोर्ट तयार गरेका हौँ ।
अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट विश्वभर ३ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । करिब ९० हजार बढीमा संक्रमण देखा परेको छ । साथै ४२ हजार जति संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएको बताइएको छ ।
नेपालमा सुरुमा एकजनामा बाहेक अन्य कसैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन । तर पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि यसको संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस, विभिन्न भाइरसहरूको समूह हो । यो भाइरस सुरु–सुरुमा सामान्य रुघा खोकीबाट सुरु भई पछि ज्यानै लिने किसिमको हुन्छ ।
यो भाइरस मानिस र जनावरमा दुवैमा देखिन सक्छ । याे भाइरस संक्रमण भएपछि सुरु–सुरुमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने र पछि निमोनिया हुने, मिर्गौलाले काम गर्न छाड्ने र कलेजोमा तरल पदार्थ वृद्धि हुनेजस्ता लक्षण हुन्छन् ।
कोरोना भाइरस छिटाे सर्ने भएकाले पनि मानिसहरूमा यसले अझ महामारी फैलाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसकाे संक्रमणपछि पहिचान हुन नै करिब २ हप्ता कुर्नुपर्ने र यसअघि नै कोरोना मानिसमा सरिसक्ने भएकाले यसको जोखिम बढेको हो ।
न्यू इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनको एक रिपोर्टअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमणको उच्च जोखिम मानिसमा यसका लक्षण देखिन थालेपछि क्रमशः हुने उल्लेख छ । कोरोना भाइरस फ्लूजस्तै गरी फैलने सो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी रोग भएका, वृद्धवृद्धा र डायबेटिज र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा यसको उच्च जोखिम हुने बताइएको छ ।
शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले ब्याक्टेरियासँग कसरी जुधिरहेको छ भन्ने कुराले यसको जोखिम निर्धारण गर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरुले जनाएका छन् ।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक‚ जसमा मुटु रोग, डायबिटिज र अरु श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू भएका व्यक्तिलाई सुरुमा निमोनियाबाट सुरु भएर शरीरका अङ्गले काम गर्न छाड्नेसम्म हुन्छ ।
सवधानी कसरी अपनाउने ?
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानिसमा त्रास फैलिएको छ । महामारी विज्ञका अनुसार यसको तयारी भनेकै धैर्य हो । आत्तिएर समस्याको हल नहुने र यसको सतर्कता भनेकै यसको सामना गर्नु हो ।
यसको नियन्त्रणका लागि सँधै साबुन-पानीले हात धुने, हाच्छ्यूँ गर्दा नाकमुख छोप्ने । यदि बिरामी भएमा घरमा बस्नु नै यसको नियन्त्रणको उचित उपाय हो । शौचालय गएपछि र हाच्छ्यूँ गरेपछि करीब २० सेकेन्डजति हात धुनुपर्छ । नाङ्गो हातले आँखा, नाक, मुख छुनु हुँदैन । साथै भीडभाढयुक्त ठाउँमा मास्क लगाउने ।
यदि तपाईं पहिलैदेखि बिरामी हुनुहुन्छ र चिकित्सक होइन भने यसको एउटा छोटो उत्तर भनेको ‘नलागाउनु’ नै हुन्छ । मास्क लगाउनु मात्र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त होइन ।
मास्क लगाउनु भनेको आफूमा रहेको भाइरस अरुमा फैलन नदिनका लागि मात्र हो । सामान्य सर्जिकल मास्कले बिरामी व्यक्तिको मुखबाट आउने छिट्टाहरू रोक्ने भएकाले यसको प्रयोग विशेषगरी चिकित्सक र बिरामी व्यक्तिले गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कोभिड–१९ मौसमी हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । जाडो मौसममा यसले छोडेको असर गर्मीमा बिस्तारै कम हुँदै जानसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसको अधिक संक्रमण उत्तरी क्षेत्रतिर ज्यादा देखिएकोले पनि यसको असर गर्मीको समयमा कम हुने विश्वास गरिएको हो । कोरोना अरू नियमित फ्लूजस्तै भएको तर कसरी फैलन सक्छ भन्ने विषयमा अझै यकीन गर्न सकिएको छैन ।(एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
Previous articleमरिच सेवनले आँखा कमजोरी, क्यान्सर र पाइल्सबाट पाइन्छ छुटकारा
Next articleबेल्जियममा पर्वत धाईरिङका जैसी मृत भेटिए